Windows inotendeuka makumi matatu nemashanu. Iyo nyaya yemudiwa wedu akaipa | Linux Vakapindwa muropa
Windows inotendeuka makumi matatu nemashanu. Iyo nyaya yemudiwa wedu akaipa
Hapana nyaya ingave yakakwana pasina gamba, uye hapana gamba rinogona kunge risina munhu akaipa. Iyo yemahara software kufamba ingangove isina revo pasina kushungurudzwa kweanobata software marezinesi, uye, Linux ingangove imwe inogadzirwa neUnix isina Microsoft Windows.
Naizvozvo, isu tichaongorora makumi matatu nehafu emakore enhoroondo yaro
1 Windows inotendeuka makumi matatu nemashanu. Izvi ndizvo zvakachinja
2 Iwo mapfumbamwe makuru shanduro
Windows inotendeuka makumi matatu nemashanu. Izvi ndizvo zvakachinja
Ichokwadi kuti Microsoft haisisiri kutonga nyika yemakomputa sezvayakaita muma90s, uye hapana kana chimwe chakaburitswa chakawana mukurumbira weWindows XP, Nekudaro, anopfuura anopfuura bhirioni dhizaini anoshandisa Windows 10, izvo zvinoita kuti Microsoft ishandise sisitimu inonyanya kushandiswa yemunhu komputa chikuva..
Android neIOS zvinogona kunge zviri zvinoshandiswa zvakanyanya pamafoni efoni, uye izvi zvakapetwa katatu nhamba yekutyaira pamakomputa ako. uye kuti Linux ine hafu yemusika wemaseva. Asi chero bedzi makomputa ako achiri kushandiswa, iwo musika uchave uri weMicrosoft Windows.
Iwo mapfumbamwe makuru shanduro
Iyi vhezheni yakaburitswa munaNovember 20, 1985. Yakanga iri yekutanga Microsoft yakabudirira kuyedza kugadzira 16-bit graphical interface.. Windows 1 yakamhanya paMS-DOS uye ndokushandisa zvine simba mbeva.
Shanduro yechipiri yakaburitswa muna Zvita 1987 uye yakaunza zvinhu zvinoverengeka zvitsva zvichiri kushanda nanhasi. Iyo control panel yakaunza pamwechete akasiyana marongero ehurongwa uye sarudzo dzekumisikidza munzvimbo imwe. Mahwindo anogona kuvharwa uye akaisirwa mabhatani ekudzora uye kuwedzera.
Chekutanga vhezheni yekuda hard drive. Yakavambwa muna 1990 uye fYaive yekutanga Windows kubata. Iyo yekushandisa interface yakatsigira 256 mavara.
Kubva paWindows 3 unogona kumhanyisa zvirongwa zveMS-DOS.
Yaive inopfuura ingori vhezheni 3 yekuvandudza. Kwenguva yekutanga ini ndaishandisa CD senzvimbo yekumisikidza uye kamwe ndakatumirwa pane rakaomarara dhisiki raida pakati pegumi ne10MB.
Windows 3.1 yakaunza rutsigiro rwekushandisa mbeva nehurongwa hweMS-DOS, TrueType uye Minesweeper mafonti.
Windows inotendeuka makumi matatu nemashanu. Kubva padhiropiki dhisiki kuenda kumapenduru aishandisa ese ekuisa midhiya
Yakaburitswa muna Nyamavhuvhu 1995 yakaunza yekutanga bhatani uye menyu, yaive nerutsigiro rwemultitasking
DNenzira imwecheteyo, 32-bit nharaunda nebara rebasa zvakaunzwa. MS-DOS yakanga ichiri kudiwa kuti iite zvimwe zvirongwa zvakakosha.
Neiyi vhezheni Pfungwa ye "plug uye play" yakaitwa, zvinoenderana nekuti, kana iyo sisitimu yekushandisa ikaona mudziyo wakabatana, yakatsvaga ivo vatyairi. Nguva zhinji zvaisashanda uye iwe waifanirwa kutendeukira kune iyo dvd iyo vagadziri vakapa nevatyairi.
Mune imwe yapashure yekuvandudza, Internet Explorer yaizoonekwa.
June 1998 akativigira iyi vhezheni yakavakirwa paWindows 95 uye yakauya neanotevera mafomu akaiswa-pamberi.Iyo yakaunza IE 4, Outlook Express, Windows Kero Book, Microsoft Chat uye NetShow Player, iyo yekupedzisira yakatsiviwa neWindows Media Player gore rakatevera.
IWindows Driver Model yezvinhu zvemakomputa uye zvishongedzo zvakaunzwa - mutyairi anoenderana neshanduro dzese dzemberi dzeWindows.
Inofungidzirwa kutadza kukuru kwetambo (kusvika pakuuya kweWindows Vista) yaive yekupedzisira MS-DOS-based Windows, uye kupera kwetambo Windows 9x.
Iyo yakaunza mamwe automated system kudzoreredza maturusi, mupepeti mupepeti, uye shanduro nyowani dzeInternet Explorer uye Windows Media.
Paive nekunyunyuta kwakawanda pamusoro pekuisa uye kugadzikana matambudziko aakange anayo.
Zvichida inoshanda kwazvo sisitimu yekushandisa munhoroondo. Yakatangwa munaGumiguru 2001 uye yakabatanidza mutsara webhizinesi uye mashandiro evatengi anoshanda.
Yakashandisa Windows NT base, kunyange hazvo zvinhu zveWindows ME graphical interface zvakawedzerwa kusanganisira bhatani rekutanga girini, bhuru rebasa rebhuruu, iyo Wallpaper Wallpaper, uye zvimwe zvinoonekwa.
Wakawedzera rutsigiro rwekutsva kweCD, otomatiki CD kutamba, uye nyowani otomatiki kugadzirisa uye ekudzosera maturusi.
Windows XP yaive nerutsigiro rwepamutemo kwemakore gumi nemana, izwi rakawedzerwa mukambani uye neruzhinji rwevaya vaida kuribhadharira.
In the inotevera ngatitaurei nezvekukundikana kukuru munhoroondo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows inotendeuka makumi matatu nemashanu. Iyo nyaya yemudiwa wedu akaipa
Makore makumi matatu nemashanu eWindows. Kubva kuvavengi vasingadzoreki shamwari dzepedyo
Kali Linux 2020.4 inosvika ine akawanda akakosha shanduko, tanga wavaziva